घरको पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारको ३ जनाको उड्याे प्राण पखेरू! – PathivaraOnline
Home > समाचार > घरको पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारको ३ जनाको उड्याे प्राण पखेरू!
काठमाडौं । मंगलबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौं मुलपानीमा पर्खाल भत्किँदा एकै परिवारको तीनजनाको ज्यान गएको छ । बलराम खत्रीको पक्की घरको पर्खाल भत्किँदा मुलपानी बाबाचोकमा टहरामा बस्दै आएका एकै परिवारका तीनजनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीकाअनुसार ज्यान गुमाउनेहरुमा २० वर्षीया निलु यादव, ३५ वर्षीया सर्मिला यादव र कुन्दन यादव रहेका छन् । उनीहरु एकै परिवारका रहेका प्रहरीको भनाइ छ । मंगलबारदेखि पानी पर्ने थाले पनि बिहीबारदेखिको भीषण वर्षाले मुलुकभर जनधनको क्षति गरेको छ । मुलपानी बाहेक नै विभिन्न जिल्लामा गएको पहिरो, बाढी र डुमानमा परेर सात जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
लिपुलेक जाने बाटो बनाएकाे बिरोधमा उत्रिएका बिद्यार्थीहरू भारतीय दुतावास नपुग्दै यसरी समातिए
टिप्परले कि.चेर मा-रिएका दिलिपका बाबुलाई ३ दिन अघि नै यस्तो ध म्की आएको थियो